Home Somali News Somaliland: Dadka Gaagaaban Ee Ku Nool Hargeysa Oo Samaysatay Urur U Gaar
Dadka Aadka u gaagaaban ee ku nool magaalada Hargeysa, ayaa samaystay Urur difaaca danahooda, kana shaqeeya horumarkooda. Waxay cabasho ka muujiyeen dadka oo inta badan ilaaqa islamarkaana abuurkooda layaab ka muujiya.
Shucayb Xasan Ducaale, oo dhawr iyo sodon jir ah, Nimco Cabdi, oo 19 jir ah iyo Mustafe Xasan Axmed(Mustafe Gaab), oo 29 jir ah ayaa BBC-da u sheegay inay samaysteen urur ay ku midaysan yihiin oo danahooda ka shaqeeya .
Saddexdan qof ayaa sheegay inay dhammaantood dadka kala kulmaan arrimo isku mid ah kuwaasi oo ku saabsan in lagu dacaayadeeyo gaabnidooda ama dadku kaga riwaayadsadaan, mararka qaarna looba arko caruur yaryar.
Waxa ay sheegeen inay Hargeysa ku joogaan 12 qof oo gaagaaban, halka ay Burco kaga war hayaan 15 qof oo gaagaaban, waxaanu ururkan u gaarka ahi ka shaqayn doonaa danahooda.
“Waxaanu samaysanay Ururka dadka ugu gaagaaban Somaliland, markaanu aragnay in Ururka dadka gaagaabani ka maqan yahay Somaliland, ayaanu ku fikiray sidii aanu xaqayaga iyo xuquuqdayada u soo dhacsan lahayn,waxaanuna dhawaan u samayn doonaa xafladdii furitaanka, dhinaca kale marka aanu bulshada ku dhex noolahay aad bay noogu mashquulaan oo qaar baabay baabuurtu jiidhaa siday noo eegayaan” Ayuu yidhi Mustafe Gaab.
Shucayb Xasan Ducaale, ayaa isna ka sheekeeyay waxyaabaha uu bulshada kala kulmo “Mararka qaar bay ninkaygaa weyn ciyaalku I jiitaan ba oo yidhaahdaan Inankan yar la ciyaar, markaa siyaasad iyo farsamo ayaan iskaga dhiciyaa”
[quote]Mustafe Gaab ayaa isna bulshada ugu baaqay inaanay ku mashquulin “Waxaan dadweynaha u soo jeedin lahaa inay ilaaqda naga daayaan oo ay u arkaan inaanu nahay dad dadka la mid ah oo bulshada la nool” . Nimco ayaa iyana tidhi “Dadweynaha waxaan odhan lahaa ha nagu mashquulina”, halka uu Shucayb ku baaqay in bulshadu barbar istaagto Ururkooda cusub “ Dadweynaha waxaanu leenahay Ururkaas baanu samaynay ee na garab istaaga”[/quote]
Saddexdan qof ee ka mid ah bulshada aadka u gaagaaban ayaa sheegay in mid kasta ehelkiisu dhaadheer yahay balse gaabnidu isaga uun ku kooban tahay.
Ururka Dadka gaagaaban ee Hargeisa